ढाका विशेषज्ञ लिम्बु अमेरिकामा सम्मानित
काठमाडौँ । ढाका विशेषज्ञ कल्पना योङहाङ लिम्बु अमेरिकामा ‘अभियान श्री सम्मान– २०७६’ बाट सम्मानित भएकी छिन् । सान फ्रान्सिस्को बे एरियामा सम्पन्न चौथो ग्लोबल नेपाली फिल्म अवार्डमा उनलाई सम्मान प्रदान गरिएको थियो ।
माथिल्लो भोटेकोशीको व्यापारिक उत्पादन २ सातापछि
चौतारा । पटकपटकको प्राकृतिक प्रकोपबाट झण्डै छ वर्षदेखि बन्द रहेको निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ४५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाबाट शनिबारबाट परीक्षण प्रसारण गरिएको छ । सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकाअन्तर्गत तातोपानीमा बाँधस्थल र फुल्पिङकट्टी झिर्पुमा विद्युत्गृह रहेको आयोजनाबाट परीक्षण प्रसारण गरिए पनि आगामी १५ दिनपछि व्यापारिक उत्पादन गरिने आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विक्रम स्थापितले जानकारी दिए ।
उकालो लाग्दै साताको शेयर बजार : एक अर्ब २७ करोडको कारोबार
काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा यस साता शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक उकालोको यात्रामा देखिएको छ । शेयर कारोबार हुने पाँच दिनमध्ये दुई दिन नेप्सेले नयाँ यात्रा तय नगरे पनि पछिल्ला तीन दिन भने बजार सुधारात्मक दिशामा अगाडि बढ्दा नेप्सेले समेत गति लियो ।
धान बेच्न पालो कुर्दै वीरगञ्ज महानगरपालिका–२४ बहुअरीका किसान
वीरगञ्ज । सङ्घीय सरकारले यस वर्ष किसानबाट धान खरीद गर्न बजार भाउभन्दा करिब १० प्रतिशत बढी समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छ । मूल्य निर्धारणसँगै यसपालि वीरगञ्ज महानगरपालिका–२४ बहुअरीका किसान कपिलदेव यादवले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड वीरगञ्ज शाखालाई धान बेच्ने सोच बनाएका छन् ।
नागरिकलाई सुखी र समृद्ध बनाउ राष्ट्रिय योजना आयोग तत्पर
ललितपुुर । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले चालु पन्ध्रौंँ योजनामा नागरिकलाई सुखी र समृद्ध बनाउने लक्ष्य कार्यान्वयन गराउन आयोग तत्पर रहेको बताएका छन् । नेपाल खुला विश्वविद्यालय व्यवस्थापन तथा कानून सङ्कायले आज आयोजना गरेको ‘समृद्ध नेपाल निर्माण गरी गुणस्तरीय जीवनयापन गर्नका लागि आवश्यक आर्थिक रुपान्तरण’ विषयको कार्यक्रममा उपाध्यक्ष कँडेलले दिगो विकासका १७ लक्ष्यमध्ये १० लक्ष्यमा समृद्धिका चार र सुखका छ सूचक, मापदण्ड र दृष्टिकोण समावेश भएको बताए ।
बैंककाे लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा, व्यापार घाटा र बेराेजगारी बढ्दै
काठमाडौँ । के कमर्शियल बैंकको मुख्य काम नाफा मात्र आर्जन गर्नु हो ? होइन, भने अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी वढाउन ग्राहकलाई किन हौस्याइरहेका हुन्छन् ? यसको जवाफ सजिलो छैन ।
३३ किलो सुन प्रकरणमा परेको आरके ज्वेलर्सको सिलबन्दी हट्यो
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले साढे ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणबारे अनुसन्धान गर्न गठित उच्चस्तरीय छानविन समितिले सिलबन्दी खुला गरी आरके ज्वेलर्स सञ्चालनका लागि बाटो खुला गरेको छ । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले बुधबार काठमाडौँको न्यूरोड र दरबारमार्गमा रहेको आरके ज्वेलर्समा लगाएको सिलबन्दी हटाएर पसल सञ्चालन गर्न आदेश जारी गरेको हो ।
नेपाल टेलिकमको अफरः ‘आफन्तलाई उपहार, सम्बन्ध सदाबहार’
काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमले ग्राहकको रुचीलाई ध्यानमा राखी भ्वाइस तथा डाटा सेवा सस्तो मूल्यमा उपहारस्वरुप प्रदान गर्न सकिने योजना ल्याएको छ। टेलिकमले निश्चित दिनका लागि भ्वाइस वा डाटा सेवा साथीभाइ वा आफन्तलाई उपहारका रुपमा प्रदान गर्न सक्ने योजना ल्याएको हो ।
चीनबाट आयात हुन थालेपछि प्याजको मूल्य ओरालो लाग्दै
काठमाडौँ । नेपाली बजारमा एकाएक आकाशिएको प्याजको मूल्य घट्न थालेको छ । एक किलो प्याजको मूल्य २५० रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य भएका उपभोक्ताहरुले आज मात्रै १९० रुपैयाँ किलो खुद्रा मूल्यमा प्याज किन्न सक्ने भएका छन् ।
काठमाडौँ । आज सुनको मूल्यमा भारी वृद्धि भएको छ । आज छापावाल सुन तोलाको ७२ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । आजको मूल्य मंगलबारको भन्दा तोलामा ८ सय रुपैयाँले बढी हो ।